"Miomàna hihaona amin’Andriamanitrao."Amosa 4:12
"Mitadiava an’i Jehovah … Ilay … mampody ny aloky ny fahafatesana ho maraina."Amosa 5:6,8
Tsy azo ivalozana, fa mizotra any amin’ilay «vavahady farany» ny olona rehetra. Ny safidiny manokana no mamaritra izay ho hitany ao ambadik’io: na izy ho velona mandrakizay miaraka amin’Andriamanitra, na ho lavitra Azy mandrakizay ary tsy hahafantatra ny fitiavany. “Andriamanitra dia fitiavana” (1 Jaona 4:8), ary ny fomba ahafantarana ny halalin’izany fitiavana izany, dia ny hazofijaliana izay nanomboana an’i Jesosy Zanany. Raha manao tsinontsinona na mandà ny fanatrehan’Andriamanitra, dia tsy hahafantatra mandrakizay izany fitiavany izany.
Toy ny fitsinjovan’Andriamanitra ireo olona an-tapitrisany eto an-tany, dia mitsinjo anao manokana ihany koa Izy. Misy dikany ny fiainanao. Teraka, velona, maty… Io ve no tanjon’ny fiainana? Rehefa manakaiky ny fahafatesana ianao, manakaiky ilay vavahady farany, tsy misy afa-tsy tebiteby manjavozavo fotsiny ve no tsapanao? Tsy mampanontany tena anao ve io zavatra hitranga na ho ela na ho haingana io? Manana fanahy sy saina afaka mametraka fanontaniana ianao, koa aza odiana tsy fantatra izany. Mitadiava an’Andriamanitra!
Hanjary mazava ny anton’ny fahavelomanao eto an-tany. Ny angatahin’Andriamanitra aminao, dia ny hiomananao anio hihaona aminy. “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona 3:16). Anio dia tompon’andraikitra ny tsirairay, handray io fanomezan’Andriamanitra io. “Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana” (1 Jaona 5:12). Ny mpino dia tafaray amin’i Jesosy Kristy, Ilay Zanak’Andriamanitra, ho amin’ny fiainana mandrakizay, ka hiara-mandingana aminy io “vavahady farany” io. Dingana eo no ho eo izany, “toy ny indray mipy maso”, ahatongavana eo amin’ny fanatrehan’Andriamanitra, izay efa tsinjo sahady amin’ny finoana.!